Atletico Madrid Oo Si Cadho Leh Uga Hadashay Habdhaqankii Garsooraha Ee Kulankii Xalayto Ee Barcelona Iyagoo Dareemay In Loo Eexdo Blaugrana. | Haqabtire News
Atletico Madrid Oo Si Cadho Leh Uga Hadashay Habdhaqankii Garsooraha Ee Kulankii Xalayto Ee Barcelona Iyagoo Dareemay In Loo Eexdo Blaugrana.
Diego Simeone ayaa diiday inuu ku dhaleeceeyo Fernando Torres guuldaradii ka soo gaartay Barcelona ka dib markii weeraryahanka Atletico Madrid uu casaan qaatay taasoo keentay dib u soo laabashadii ay sameysay kooxda martida loogu ahaa Camp Nou.
Torres ayaa hogaanka u dhiibay Atletico daqiiqadii 25aad, waxaana 10kii daqiiqo ee ku xigtay uu qaatay labo jaale taasoo keentay in ciyaarta laga saaro.
Wixii markaas ka danbeeyay Barca ayaa ciyaarta ku soo laabatay iyadoo ku badiyay 2-1 ka dib labo guul uu dhaliyay Luis Suarez, laakiin Simeone ayaa sheegay inuusan dooneynin inuu marmarsiiyo ka dhigto weeraryahankiisa markii la weydiiyay cida uu ku eedeynayo guuldarada.
“Hubaashii kuma eedeynayo Torres” ayuu ku jawaabay, ka hor inta uusan si maldahan uga hadlin sida uusan ugu faraxsaneyn sida uu ciyaarta u garsooray garsooraha Jarmalka Felix Brych.
“Ma sheegi karo wixii aan doono… Waxaan u baahanahay inaan ka fekero waxa aan sheegayo si aanan u dhihin wax dhibaato ii keeni kara” ayuu yiri ciyaarta ka dib markii la weydiiyay dhacdadii Luis Suarez, kaasoo ka badbaaday inuu casaan toos ah qaato markii uu si xun u haraantiyay Juanfran qeybtii hore ama markii ay isku dhaceen Felipe Luis.
“Waxaa jiray in ka badan labo dhacdo” ayuu yiri isagoo diiday inuu faahfaahin ka bixiyo madaama uu ka baqayo inuu ganaax kala kulmo UEFA.
Filipe Luis aysan wax cabsi ah ka qabin inuu ciqaab kala kulmo Uefa isagoo yiri:
“Casaankii Torres wuxuu ahaa cadaalad darro, waxaana uu bedelay ciyaarta.
“Barcelona waa la ilaaliyaa. Marka aad ka horimaaneyso iyaga waxaad ogaaneysaa inay yihiin koox awood sharci oo weyn leh.
“Waxaa jirta cabsi ay ka qabaan in Barcelona laga reebo tartanka. Waxaana ay taasi wax badan dhaawaceysaa UEFA.
“Kulankii Real Madrud waxaa jirtay xaalad la mid ah oo uu sameeyay Suarez. Ma aqaano waxa ay tahay inuu midkood sameeyo si casaan loo siiyo.
“Fernando, labo qalad, labo kaar. Garsooraha ma uusan daawanin kulamo badan oo Madrid-Barcelona ah. Waxaa jiri laheyd sideed kaar oo casaan ah.
“Ma aqaano waxa ay tahay inuu ciyaaryahan Barcelona ah sameeyo si casaan loo siiyo.
“Si saxan ayay casaan ii siiyeen kulankii La Liga, laakiin kooxda kale si la mid ah loolama dhaqmo. Waana taas waxa xanuunka leh.”